Iskaa wax u qabso - Columbus Arts Fest
Noqo awooda ka danbeysa Bandhig faneedka Columbus! Mutadawiciinta goobta joogtaa waa lama huraan guusha dhacdadayada. Sannad kasta, Bandhigu waxa uu nolosha ku soo noolaadaa iyada oo la kaashanayo shaqaalaha Golaha Farshaxanka Weyn ee Columbus, xubnaha Guddiga Isku-dubbaridka iyo koox ballaadhan oo ka badan 400 oo mutadawiciin ah oo goobta jooga.
Haddi aad xiisaynayso inaad amaahiso fasaxa Farshaxanka gacanta dhamaadka todobaadka ama aad go'aansato inaad qorshayso Bandhigga Farshaxanka sanadka oo dhan, caawimadaadu qiimo ayay noo leedahay!
Todobaadka Isxilqaanka Isxilqaan
Mutadawiciin tamar leh, saaxiibtinimo leh ayaa looga baahan yahay hawlo kala duwan, sida la socodka meelaha fanka, ka caawinta hawlaha fanka, caawinta dhabarka iyo wax ka badan. Xataa dhowr saacadood ayaa isbedel weyn sameeya!
Is diwaangeli oo isdiiwaangeli
Koox asaasi ah oo shaqsiyaad gaar ah loo yaqaan Guddiga Isku-dubaridku waxay mas'uul ka yihiin qorshaynta ka hor iidda iyo hawl-maalmeedka goobta. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 14 guddi-hoosaadyo, oo mid walbaa mas'uul ka ah hawlo gaar ah oo ka tirsan xafladda.
Haddii aad xiisaynayso inaad ku biirto Guddiga Isku-dubbaridka, kala xidhiidh Isku-duwaha Festival Jenica Richards at jrichards@gcac.org.
Dhammaan mutadawiciinta ayaa heli doona:
Funaanad iskaa wax u qabso ah
Biyo dhalada ah oo bilaasha ah goob kasta oo cabitaanka laga cabbo
Cunto fudud markaad soo gasho
Mahad-naqnimadayada oo aan dhimanayn!
Shuruudaha da'da iskaa wax u qabso:
Dhammaan tabaruceyaasha: 12+
Kormeerayaasha goobta farshaxanka: 16+
Hoyga VIP Lounge iyo tabaruceyaasha cabitaanka: 21+
Tabarucayaasha 12-16 waa inay iskaa wax u qabso la sameeyaan qof weyn (waa inay isku qoraan fursad isku mid ah iyo isbeddelka)